Kaddib markii loo hakiyey bisha Ramadaan awgeed, horyaalka Soomaali Premier League oo maanta dib u furmi doona – Gool FM
Kaddib markii loo hakiyey bisha Ramadaan awgeed, horyaalka Soomaali Premier League oo maanta dib u furmi doona
Haaruun June 7, 2019
(Muqdisho) 07 Juunyo 2019. Waxaa dib u furmi doona maanta Horyaalka Soomaali Premier League oo sanadkan u muuqda mid xiiso badan marka loo eego sanadihii hore.
Horyaalka Soomaali Premier League ayaa muddo bil ah laga nasanayay ciyaaristiisa sababo la xariira bisha Barakeysan ee Ramadaan, xiriirka kubadda cagta ayaana hakad ku sameyay horyaalka maadaama aysan awoodin ciyaartoyda inay dheelan muddo 90-daqiiqo iyagoo sooman.
Kooxda kubadda cagta Dekedda ayaa horyaalka Soomaali Premier League difaacaneysa, iyadoo iminka hoggaanka horyaalka ku haysa 3 dhibcood.
Kooxaha qaar waxay tababar adag sameynayeen intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoo diyaar-garow adag u galay horyaalka.
XAQIIQOOYINKA CIYAARTA MAANTA:-
Kooxaha Dekedda iyo Madbacada Qaranka ayaa kuwada dheeli doona galabta garoonka Banaadir ee degmada Cabdicasiis.
Wiilasha Madbacada Qaranka kulankii ugu dambeyay waxay guuldarro xanuun badan oo 2-0 kala soo kulmeen naadiga Ottobaarka ama Gaadiidka, kulan ciyaareed dhacay 30/4/2019.
Naadiga Dekedda ciyaartii ugu dambeysay waxay 4-1 ugu soo adkaadeen kooxda Jeenyo, ciyaar dhacday 29/4/2019.
Kooxda Madbacada kulankan waxaa ka maqnaanaya dhowr ciyaartooy oo siyaabo kala duwan uga maqnaanaya, waxaana ka mid ah xiddiga reer Uganda ee Cabdinuur oo kulankan roose ama kaarka cas ku seegaya isagoo qaatay ciyaartii ugu dambeysay oo ay kooxdiisa guuldarrada kala kulantay kooxda Gaadiidka.
Sido kale waxaa ka maqan kooxdan Xasan Siidow Hilowle oo 3-jaalle u aruurtay taas oo la micno ah in kulankan uu seegayo iyo Laacibka reer Uganda ee Osman oo dib ugu laabtay dalkiisa hooyo.
Wiilasha Dekedda kulan ciyaareedkan waxaa dhaawac uga maqan xiddigaha kala ah Idiris Aamiin Cali oo tababarka ku dhaawacmay isagoo waxyeelo ka sheeganaya canqowga iyo Caadil Nuur Cali oo ciyaartan ugu maqnaanaya xanuun.
Sidoo kale Dekedda waxa ay weynaysaa xiddigeeda Cabdicasiis Catoosh kaas oo kulankiisii ugu dambeeyay ka maqnaanaya, maadaama uu roose qaatay kulankii ay kooxdiisa la dheeshay naadiga Muqdisho City Club, wuxuuna dib ugu soo laban doonaa kulanka ay la dheeli doonaan kooxda Midnimo.
Kooxda Madbacadda ayaa ku jirta booska 9-aad iyadoo leh 7-dhibcood, halka Dekedda ay saaran tahay fooqa sare ee horyaalka iyadoo leh 26-dhibcood.
Tartanka: Horyaalka Somali Premier League
Kooxaha: Dekedda FC vs Madbacadda Qaranka
Saacadda: 3:30 galabnnimo Saadda geeska Afrika
Qiimaha Kulanka: Lacag La’aan
Waakee ciyaaryahanka kaliya uu ka doonayo Jurgen Klopp suuqa kala iibsiga ee xagaaga?
Kooxaha Chelsea & Real Madrid oo isku raacay lacagaha ay ku kala iibsanayaan Eden Hazard & Gunnada Ay Blues dib ka heli doonto.